Tokony ho tamin’ny 01 ora folakandro no naharay antso avy amin’ny fokonolona tao Ambodivondava Andrefana ny polisy mahakasika ny fahatraran’izy ireo lehilahy 01, 29 taona, vao avy namaky tranon’olona teny an-toerana. Tonga teny an-toerana avy hatrany ny polisy nizaha ifotony ny zava-nitranga ka voaaro tamin’ny fitsaram-bahoaka ity olon-dratsy ity. Marihina fa tamin’ny fotoana nahatrarana azy io dia mbola teny amin’ity lehilahy ity avokoa ny fitaovana famakiany trano toy ny famaky sy ny « barre à pince ». Ankoatra ireo dia tratra teny aminy ihany koa ny finday maromaro sy fahita lavitra lehibe 01, ny fitaovan-dakozia maro toy ny vilany sy ny fatapera, ary ny biby fiompy rehetra tao an-trano toy ny reny akoho sy ny zanany, ny voromailala vitsivitsy. Nandritra ny fanadihadiana ity voasambotra ity moa dia niaiky avy hatrany ny helony izy. Mbola mitohy ny fanadihadiana ary rehefa vita izany dia haverina amin’ny tompony ihany koa ireo entana ireo.